Boky 10 ambony momba ny Fanjakana Romanina | Classics - Boky maneran-tany
Ny USP an'ny Empira Romana no nahavelomany hatramin'izay. Ny fanjakana lehibe indrindra nisy hatramin’izay tany Eoropa, dia ny Fanjakana Romanina dia nanomboka tamin’ny fandresen’ireo Italiana mpifanolo-bodirindrina taminy tamin’ireo taonjato farany talohan’i Kristy ary naharitra, tamin’ny endriny iray na hafa, nandritra ny 1.000 XNUMX taona mahery. Lasa modely nalain-tahaka imbetsaka hatramin’ny taonjato faha-XNUMX ny fitondram-panjaka naorin’i Aogosto tamin’ny faran’ny taonarivo. Ny anaram-boninahitra slavy tsar dia akony lavitra an'i Kaisara. Ny Voromahery dia nanidina nanerana ny fanjakan'i Aotrisy, Frantsa ary Meksika. Ny fehezam-boninkazo romana, famaky voafono anaty amboara tsorakazo, dia tsy vitan'ny hoe Mussolini sy Hitler ihany no nampiasa azy ireo, fa mbola nandravaka ny Antenimieran'ny Etazonia sy ny Theater Sheldonian any Oxford.
Ny bokiko Rome: An Empire's Story , ny fanontana faharoa izay vao nivoaka, dia mamaritra ity andohalambo lavan'ny tantara ity nanomboka tamin'ny tanànan'ny Iron Age teo amin'ny Tiber ka hatrany Byzance, natao fahirano teo amin'ny Bosphorus rehefa nihena ny fananany Syriana sy ny vehivavy Afrikana. tanan’ny tafika Arabo. Izy io koa dia mandinika ny akon'ny Fanjakana Romanina nandritra ny taonjato maro.
Ireto ny sasany amin'ireo boky tsara indrindra amin'ny literatiora mivelatra sy mivelatra hatrany.
1. Ny tantaran'ny fihemorana sy ny fianjeran'ny Fanjakana Romanina nataon'i Edward Gibbon
Ity tantara misy boky enina ity (navoaka voalohany teo anelanelan'ny 1776 sy 1789) izao dia vakian'ny manam-pahaizana momba ny Fahazavana bebe kokoa noho ny an'ny mpahay tantara romanina, saingy tsy nisy olona nitantara ny tantaran'i Roma tamin'ny haingo sy tsiro kokoa. Ny fanokafana malaza ao amin'ny sisan'ny Roman Forum dia mandoko ny boky manontolo. Mbola sary mahery vaika ny fahatsapana ny fahagola izay misalasala manome lalana ho an'ny taonjato manaraka. Fantatr'i Gibbon koa fa i Byzance koa dia, ary mbola misy, Roma ela be taorian'ny nandravan'ny barbarianina (indroa) ny Tanàna Mandrakizay ary nanana papa. Tsy misy teny mamaritra azy tsara kokoa noho ny epic.
2. Ny ranomasina simba nataon'i Peregrine Horden sy Nicholas Purcell
Tsy mitovy amin'ny Gibbon araka izay azo atao, ankoatra ny habeny sy ny faniriany. Navoaka tamin'ny taona 2000, io no asa faran'izay mamirapiratra sy manan-danja indrindra momba ny tontolo taloha. Mifototra amin'ny fahatakarana lalina momba ny tontolo Mediteraneana, manangana sarin'ny faritra fahiny ho toy ny tontolon'ny vondrom-piarahamonina lavitra nefa mifamatotra izy, izay maro amin'izy ireo no voalanjalanja tsara eo amin'ny sisin'ny faharetana. Eto dia mitana anjara toerana faharoa ao ambadiky ny tantsaha sy ny vohitra ny fanjakana-tanàna sy ny empira: ny ady sy ny revolisiona dia latsaky ny fijinjana sy aretina ratsy. Izy io dia dikan-teny mahasarika ny ambany indrindra amin'ny empira, ny fototra nanorenana azy. Ny fitsipi-pifehezana dia manohy miasa amin'ny fiantraikan'ny tohan-kevitra ao aminy.
3. Ny Asan’ny Apostoly
Ho an'i Roma, mazava ho azy, sambatra isika manana fijoroana vavolombelona vavolombelona. Angamba tsy misy mahasarika kokoa noho ny Asan’ny Apostoly, tohin’ny tantaran’ny Filazantsara, ny fiainana taorian’i Jesosy, izay nitranga tany Jodia, teo anivon’ireo tanànan’ny faritany atsinanan’ny fanjakana, ary tamin’ny farany, tany Roma mihitsy. Ny Acts dia manana ny zava-drehetra manomboka amin'ny famintinana ny rariny romana sy ny korontana sivily ka hatramin'ny loza ateraky ny dia an-dranomasina, ary indrindra fa ireo fitambarana hafahafa izay noraisin'ireo olom-pehezin'ny empira.
4. Ny emperora tany amin’ny tontolo romanina ny alalan ' Fergus millar
Teo amin’ny lafiny politika, nihodina teo amin’ny emperora ny zava-drehetra. Ny sangan'asan'i Fergus Millar, toy ny boky lehibe rehetra, dia niteraka adihevitra sy fanakianana, saingy nanova ny fomba fahafantarantsika ny fanaon'ny governemanta romana izany. Nifantoka tamin'ny fananganana sarin'ny zavatra tena nataon'ny emperora i Millar, avy amin'ny sata sy ny lalàny ary ny soratra sy firaketana an'ny faritany an'arivony, fa tsy ny tantara maneso ny mpanoratra, loholona toa an'i Tacitus sy Dion. Izy io koa dia nanome hevitra ny halehiben'ny empira sy ny fahamaizan'ny fampahalalana nivezivezy tamin'ny arteriany. Niady mafy ny Emperora Millar mba hanara-maso ny zava-nitranga. Tao ambadika ihany koa izy matetika, namaly ny krizy fa tsy nitarika politika. Sary sarotra ny miala amin'ny lohanao.
Sarivongan'i Marcus Aurelius any Roma. Sary: PennaPazza / Getty Images / iStockphoto
5. Ny Tontolo Fahagola an'i Peter Brown
Boky iray hafa mamela marika. Tany amin'ny toerana nahitan'ny hafa an'i Roma nahatratra ny fara tampony tamin'ny fiafaran'ny taonjato faharoa sy fahatelo, dia nanomboka teo i Brown ary nitantara ny tantaran'ireo tontolo vaovao nipoitra teo anelanelan'ny fitondran'i Marcus Aurelius sy ny mpaminany Muhammad. Ny kolontsaina, fivavahana ary fiteny vaovao tamin'ny andro taloha dia tany lonaka ho an'ny fikarohana vao haingana. Tamin'ny famerenana ny bokiko manokana dia io no vanim-potoana niova be indrindra ny tantaran'ny Romanina tato anatin'ny folo taona farany. Nanomboka ny fandalinana ny Late Antiquity i Brown, izay manana diariny, rakipahalalana ary lahateny manokana, ary nanohy nitarika teo aloha.
6. Ny Fandresena Romana an'i Mary Beard
Matetika i Roma no modely ho an’ireo mpanahaka tatỳ aoriana, hany ka mora ny manadino ny tsy fitovizan’izany tamin’izay nanaraka azy. Tsy izy io no malaza indrindra amin'ireo boky maro be nosoratan'i Beard momba an'i Roma, fa nanampy tamin'ny fikarohana ny fitambaran'ny habibiana sy ny fombafomba taorian'ny fandresen'ny Romanina. Notantarainy koa ny ezaka famoronana faran’izay mafy nataon’ny Romanina izay nanova ny fivavahany sy ny tanànany lehibe ho an’ny taranaka tsirairay.
7. Roma. Torolalana arkeolojika nataon'i Amanda Claridge
Raha te hijery ny sisa tavela amin'ity tanàna ity ianao, dia tsy misy mpitari-dalana tsara kokoa noho ity. Claridge dia mahafantatra tsara kokoa ny tanàna maoderina sy ny arkeolojia farany indrindra noho izay rehetra manoratra amin'ny teny anglisy. Ny bokiny dia torolalana mazava sy mirindra mankany amin'ireo tsangambato rava sy voaorina indrindra. Mitondra azy eny rehetra eny miaraka amiko ao an-tanàna aho (ary nampiasa kopia vitsivitsy).
8. Fanatrehana Romana an'i Catherine Edwards
Rehefa mandehandeha ao amin'ny Tanàna Mandrakizay ianao, dia tsy azo atao ny tsy mieritreritra ireo dika mitovy amin'ny Fanjakana Romanina. Ny fandraisana sary avy any Roma taty aoriana dia indostrian'ny fitomboan'ny akademika tato anatin'ny taona vitsivitsy, fa ny fanangonana ankafiziko dia mbola ity, izay avy any Thomas Macaulay mankany TS Eliot ary avy any Londres mankany Bombay.
Betsaka ny azo lazaina ... mbola avy amin'ny sarimihetsika Asterix the Gaul tamin'ny 1967. Sary: Cinetext / Belvision / Allstar
9. Asterix el Gaul nataon'i René Goscinny sy Albert Uderzo
Ny fihaonako voalohany tamin'ny fandraisana maoderina avy any Roma fahiny dia teto. Mbola mampihomehy ahy toy ny fony aho 12 taona. Nianatra namaky momba azy io ny zanako. Rehefa tonga nipetraka tany Paris aho tamin'ny naha-mpianatra nahazo diplaoma, dia tsapako izay holazain'izany momba an'i Frantsa taorian'ny Ady Lehibe Faharoa ary koa teo ambanin'ny Repoblika fahadimy. Tena mamirapiratra.
10. Byzance: Ny Fiainana Mahagaga ny Fanjakana Moyen Âge nataon'i Judith Herrin
Ny safidiko farany, satria marina ny tenin'i Gibbon fa tsy nifarana tamin'ny lasakan'i Roma ny tantaran'ny Romanina, na tamin'ny fametrahana ny emperora tandrefana farany, na tamin'ny fandresen'ny Arabo mihitsy aza. Herrin dia milaza ny tantaran'ny Arivotaonan'ny Fanjakana Romanina Kristiana tsy amin'ny alalan'ny fitantarana, fa amin'ny alalan'ny andian-tsarimihetsika mamirapiratra sy mazava. Mahafinaritra ny mamaky.
Tags: kilasika, FANJAKANA, boky, Romano, amin'ny, Top
← Karhide matotra
Ny boky tsara indrindra amin'ny 2021 | Ny boky tsara indrindra amin'ny taona →
Mpitsabo. Sampan-draharaha ara-pahasalamana Basque-Osakidetza. fandaharam-potoana iraisana
Torolàlana ho an'ny vao manomboka amin'ny sary hosodoko nomerika miaraka amin'ny Procreate
ny ozona mandrakizay